यो एउटा कार खरीद। दर्ता कागजात क्रम
एक हातले एक कार खरीद - यो एक प्रक्रिया हो जो मार्फत मान्छे एक कार किन्न चाहने धेरै। साँच्चै, आज मोटर चालकहरुलाई को बहुमत ख / एक मोडेल हुन्छन्। र प्रत्येक यसको आफ्नै कारण छ। केही मानिसहरू लामो भित्री फेला परेन भएको एक कार को सपना देख्यो छन्: यो केवल उत्पादन गर्दैन। अरूलाई नवीनता केही मात्रामा जो किनेको गर्न सकिँदैन भर पर्छन्। अरूलाई सुरक्षित र अझै सैलून मा छ जो मोडेल, प्राप्त, तर ख / Y यो सस्ता छ, तर अवस्था नै छ। सामान्य मा, ठूलो को कारण। साथै मुद्दा अधिग्रहण प्रक्रिया सम्बन्धित। र त्यसैले तिनीहरू जवाफ हुनुपर्छ।
लेनदेन को निष्कर्ष
त्यसैले, हातमा एउटा कार खरीद विक्रेता र भविष्यमा मालिक बीचको पहिलो सम्झौता छ। यो लेनदेन को पहिलो चरण हो। यो के हो?
पहिलो कुरा खरीदार र विक्रेता भेला। inspected कार को संभावित भविष्य मालिक, परीक्षण, र यो उहाँले दिन इच्छुक छ राशि stipulated। अक्सर, हुड मा एक तथाकथित मोलतोल छ। कि, विक्रेता मूल्य सँगै आउन प्रयास ठाउँमा पहिले देखि नै छ खरीदार छ।
यदि सबै तुरुन्तै पाइन्छ, त्यसपछि सम्झौता एकै समयमा निष्कर्षमा गरिनेछ। यो कागजात (जो पछि देखि नमूना सबैतिर खुलेर उपलब्ध छन् अहिले सजिलै, पाउन सकिन्छ) फारम, जो रेकर्ड गरिनेछ र डाटा किनेको र बेचिन्छ छ। र, को पाठ्यक्रम, गाडी। त्यसपछि खरीदार विक्रेता पैसा दिन्छिन्, र कार नै पहिले नै कानुनी रूपमा आफ्नो वाहन स्वामित्वमा दर्ता गर्न ट्राफिक प्रहरी विभाग पठाइयो।
हालै (वर्ष को बस एक जोडी पहिले) वाहन दर्ता प्रक्रिया नै सकेसम्म सरल भएको छ। यो तर आनन्दित सक्दैन। नवाचारै को पहिलो फाइदा तिनीहरू अब आवश्यक भन्ने तथ्यलाई मा निहित रजस्टर देखि कार हटाउन। यो खरीदार समय, नसाहरू र पैसा बचाउँछ।
कुनै पनि यातायात प्रहरी विभाग मा - दोश्रो, कार सजिलै कहीं पूरा गर्न अब सम्भव छ। एक व्यक्ति Rostov-मा-डन बसोबास यदि त्यो छ, तर कार उहाँले क्रास्नोडार ड्राइभिङ थियो, त्यो नै ठाउँमा एक पटक र वाहन दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। र ट्रान्जिट कोठा छैन आवश्यक छ। त्यसैले खरीद हतियार संग एक कार पनि सजिलो र थप सहज भएको छ।
लायक छन् कि Nuances थाहा
प्रत्येक मामला मा, तपाईंलाई थाहा रूपमा, आफ्नो पासो छ। र हातमा एक कार खरीद एक अपवाद छ।
पहिलो "पत्थर" - मिसिन को स्थिति। केही कारणले धेरै मानिसहरू (सामान्यतया एमेच्योर) भर्खरै मामला मा त्यहाँ कार मा क्षति छ के द्वारा हैरान, यदि तिनीहरू मुद्दा TC 80-90 वर्ष लाग्न। र कार गएर विवरण। र व्यर्थमा, किनभने नयाँ कार पनि जाँच गर्न आवश्यक छ। अप्रिय आश्चर्य (breakages, आदि डी) बच्न खरीदार (पाठ्यक्रम, छैन विक्रेता गरेको पैसा, आफ्नै खर्च मा) स्टेशन मा निरीक्षण मा जिद्दी गर्नुपर्छ। त्यहाँ पक्कै पनि कार परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भन्छन्।
दोस्रो "रक" - व्यवस्था। यो ट्राफिक प्रहरी को आधार मा मिसिन जीत-कोड चेक मालिक पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण छ, त्यो अपहरित थियो, कुनै पनि पक्राउ त्यहाँ छ, र यति मा। डी अन्यथा, तपाईं पैसा बिना र एक कार बिना, तपाईँले यस विषयमा बुझ्न छैन, यो किन्न भने रहन सक्छ।
तेस्रो caveat को टीसीपी मा ठाउँ खाली छ। यो हुनुपर्छ। सबै भरिएको छ भने, त्यसपछि मालिकले नयाँ टीसीपी प्राप्त गर्न एक सम्झौता मा प्रवेश गर्नु अघि कार हुनेछ।
यो सबै कुरा सुनेर पछि, व्यक्ति त्यो संग एक कार लागि किनमेल जान्छ बाटो लागि शान्त हुनेछ। सुझाव साँच्चै प्रभावकारी र कसैले अरू असफल।
PTS भर्नको लागि प्रक्रिया
यो अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। जब एक हातले एक कार खरीद कागजातहरू क्रममा र राम्ररी भरिएको हुनुपर्छ। मोटर वाहन पासपोर्ट मा छ अंक छ। त्यहाँ हालको मालिक र कार नै लेखिएको प्रमाण छ। पहिलो स्तम्भमा यो केही डाटा परिचय आवश्यक छ। पहिलो कुरा पूरा नाम छ मालिक। दोश्रो, ठाउँ जहाँ एक नयाँ कार को दर्ता मालिक। पनि सवारी साधनको बिक्री को मिति र कागजात एक व्यक्ति यो कार स्वामित्व अधिकार छ भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ भनेर संकेत गर्छ। कडाई बोल्ने, यो बिक्री एक सम्झौता हो। हस्ताक्षर को पूर्व मालिक पनि आवश्यक छ। र अन्तमा - यो कार को नयाँ मालिक को एक हस्ताक्षर छ।
यस TCP भर्नु अघि, तपाईं यसलाई साँचो छ कि छैन भनेर जाँच गर्न आवश्यक छ। Watermarks - कागजात साँचो छ भनेर प्रमाण।
मुद्रा पहिले नै बारी मा, उसलाई कुञ्जीहरू र कार दिनुभयो जो वर्तमान मालिक विक्रेता, हस्तान्तरण। के अर्को छ? नियम हातले एक कार खरीद यो पछि तपाईं सकेसम्म ट्राफिक प्रहरी मा कार को दर्ता रूपमा के गर्न आवश्यक छ कि भन्छन्। यो 10 दिन दिइएको छ, तर यो यस मामला पुल छैन संग राम्रो छ।
दर्ता एक निदान परीक्षण कार्ड सुरु हुन्छ। यो कार निरीक्षण पारित गरेको छ भन्ने तथ्यलाई confirms जो एक महत्वपूर्ण कागज, छ। दायित्व बीमा नीति उपकरण - खैर, कार्ड बीमा प्राप्त गर्न धेरै सजिलो र छिटो हुन्छ। र यो संग के गर्न? कुनै पनि बीमा कम्पनी जाने - सबै formalized छ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले बीमा कुरा, एक सानो पछि छलफल गरिनेछ।
को निदान कार्ड बाँकी छ भने, भर्खरै-मालिक आफूलाई निरीक्षण बित्दै। यो ट्राफिक प्रहरी को क्षेत्र मा स्थित छ जो एक विशेष क्षेत्र, मा गरेको छ। सामान्य मा, अवस्थामा धेरै र शब्द - 10 दिन। दृढ इच्छा सबै दिन पकड गर्न सक्नुहुन्छ।
अब बारेमा। हातमा एउटा कार खरीद लागि प्रक्रिया डिजाइन CTP बीमा नीति समावेश छ। यो अवश्य छ! यो कागजात बिना, तपाईं कार को डिजाइन बारेमा भूल गर्न सक्नुहुन्छ। खुसीको सबै avtopokupateley, आज नीति लागि कुनै पनि बीमा कम्पनी मा जारी गर्न सकिन्छ।
कागजात लागत केही कारक अनुसार गणना गरिएको छ। पहिलो - यो एक शहर हो। दोस्रो - कार ड्र गर्ने: एक प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्ति। सवारी साधनको प्रकार पनि महत्त्वपूर्ण छ। उमेर र ड्राइभिङ अनुभव - vyschityvaniya रकम लागि जरूरी। कार पावर पनि हिसाब। र को पाठ्यक्रम, अवधि जसको लागि नीति जारी छ। र खातामा बोनस-Malus गुणक लिएर। यो यस्तो छ छूट को प्रणाली, बीमा भुक्तानी रकम उपाय जो।
सामान्य मा, मापदण्ड को धेरै। तर यो कसरी व्यवहार मा देखिदैन?
मूल्य नीति के हो?
तपाईं एक कार किन्न आवश्यक भन्ने तथ्यलाई, पहिले नै भने गरिएको छ। अब यसलाई एउटा उदाहरण रूपमा मूल्य बीमा गणना कसरी देखाउन खडा।
यो ड्राइभिङ को अधिकार मा एक3वर्षको (वा बढी) अनुभव संग एक 22 वर्षीया (वा पुरानो) चालक बाहिर बनाउँछ भने सस्ता, यो हुनेछ। अधिक महंगा भने छैन 22 वर्ष पुरानो छ, कुनै अनुभव। उदाहरणका लागि, तपाईं Rostov-मा-डन शहर लाग्न सक्छ। 101-120 लिटर को यात्री कार क्षमता। एक। मा एक व्यक्ति 10 महिना वा बढी अनुभव र उमेर उपयुक्त यसलाई 8900 rubles खर्च हुनेछ। मालिक होइन 22, र पनि अनुभव छ भने, राशि दुगुना छ।
खैर, यो लिन सधैं राम्रो छ सीमित बिना बीमा चालकहरुको संख्या। यो कसैलाई गर्दा लागि कार मालिक माग्यो भने, त्यसपछि उहाँले कुनै पनि अतिरिक्त कागजात बिना यो प्रदान गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने हो। मालिक - तर सीमित बीमा यो कार ड्राइभिङ मात्र विशिष्ट व्यक्ति बस्न सक्छ भन्ने हो। यसलाई कसैले पनि फिट गर्न सक्छन् (उदाहरणका लागि, पति कार तयार र त्यो पनि वाहन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बीमा पत्नी प्रवेश)। मात्र यो चालक अनुमतिपत्र र व्यक्तिको पासपोर्ट को फोटोकपी आवश्यक हुनेछ।
सबैभन्दा महंगा बीमा - मास्को मा (अचम्मको छैन)। त्यहाँ 151 लिटर गर्न कार को क्षमता मा नीति छ। एक। र माथि, शून्य गुणक, 55 हजार rubles खर्च हुनेछ।
मिसिन खरिद पहिले नै उधारो
र यो अक्सर हुन्छ। खरीद एक कार ऋण - प्रक्रिया सबैलाई परिचित छैन। खैर, यो लाभ र लाभ सन्दर्भमा प्रश्न स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।
यो प्रक्रिया खरीदार लागि धेरै लाभदायक छ। यस अवस्थाको छ किनकी: कसैले भर्खरै एक ब्रान्ड नयाँ कार उधारो निर्णय गरे। सानो भुक्तानी ऋण गरेर मा यात्रा, सानो ... र त्यसपछि हुन contingencies, पैसा चाहिन्छ। हामी कार बेच्न छ! आफ्नो विज्ञापन ऋण को ब्यालेन्स दिन्छिन् खरीदार जो ... छ र त्यसपछि कार मालिक बन ठाँउ। र अघिल्लो मालिक भुक्तानी गरेको छ भन्ने तथ्यलाई, छूट को खातामा छ। हेर्दै गर्दा धेरै भुक्तानी कसरी, कहिले काँही भुक्तानी गर्न छ। सामान्य मा, तल लाइन पैसा, धेरै accommodating र लामो ऋण उपकारको साटो तिरे गरिएको छ रूपमा, केहि गर्न इच्छुक र कार को जरुरी आवश्यकता मा मान्छे बेचेको छ भन्ने छ।
अब, क्रेडिट मा एक कार खरीद को नियम बारे। विक्रेता संग खरीदार उधारो बैंक पठाइएको र अवशेषहरु पत्ता। कि पछि, रकम खातामा भुक्तानी। फलस्वरूप, ऋण चुक्ता छ र मिसिन "को बंधन हटाइयो।" त्यसपछि तपाईं पहिले नै एक मानक खरिद र बिक्री सम्झौता प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रसारित गर्ने रसिद जारी गर्न आवश्यक रकम, यो थप विश्वसनीय छ। कागजात मुद्रा विशेष मिसिन को छुटकारा को खाता (लेख्न जम्मा छ भनी उल्लेख कार, को रंग वर्ष बनाउन, मोडेल, चेसिस नम्बर र सबै विवरण)।
यो सजिलो तरिका हो। अझै केही लेनदेन पछि सम्पूर्ण ऋण भुक्तानी गर्न प्रतिज्ञा गर्नुभएको, कार बेच्न अनुमति प्राप्त गर्न बैंक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तर धेरै केही मानिसहरू सहमत हुनुहुन्छ। अर्को विकल्प - बहुमूल्य कुरा मिसिन राख्नु गर्न। प्लट, अपार्टमेन्ट, घर, र यति मा। डी तर यो पनि एक लाख मा मामला छ।
कसरी चयन गर्ने?
धेरै मानिसहरू कि यो एक कार छ चोट छैन विचार छ, तर ती भारी नम्बर कार को प्रकारको चयन गर्न के थाहा छैन। मानक स्थिति, तर त्यहाँ केही गम्भीर छ।
विश्वसनीयता, सभ्य प्रदर्शन, सुरक्षा, दक्षता, गुणस्तर, आराम र सौन्दर्य: यति धेरै कार मालिकहरूको लागि मुख्य चयन मापदण्ड निम्न अंक हो। सिद्धान्त मा, माथि को सबै मिसिन सामान्य छ भने, यो सही कार छ।
तर धेरै कारहरुको ध्यान BU तिनीहरू केवल सवारी सक्छ जो एक वाहन, आवश्यक मात्र किनभने थालेका छन्। प्राथमिक कसैले minibuses र एक बस अन्य कष्टप्रद पर्खने र अरूको थकित सार्वजनिक यातायात को अनुसूची निर्भर हुन चाहँदैनन्। मानिसहरू आवश्यक त्यसैले एक लागत प्रभावी (अर्थात्, एक डिजेल इन्जिन वा हाइब्रिड या त) कार यसको मुख्य कार्य प्रदर्शन हुनेछ - जानुहोस्। र यस्तो सकेसम्म सस्तो रूपमा धेरै छुट्टी को मिसिन। पर्याप्त किन्न हजारौं धेरै दसौं। एउटै "टोयोटा क्राउन" निष्पक्ष अवस्थामा ('90 मुद्दा लागि) 50 मिटर खर्च हुनेछ। पी वा 40 टन को "ओपल Cadet"। पी त्यहाँ एक विकल्प छ, र तपाईं एक मानक चलाउनु सामान्य कार किन्न चाहनुहुन्छ भने, यो सम्भव चिन्ता छैन, त्यहाँ एक उपयुक्त विकल्प छ, र पनि सम्झौता हुन सक्छ।
र अन्तमा म सत्य बताउन कार BU बारेमा चाहन्छु। धेरै मानिसहरू गल्ती मिसिन भनेर विश्वास हातमा संग - खराब विकल्प। सुदूर यसलाई देखि! त्यहाँ केही "वयस्क" कार नब्बे, शून्य र पनि eighties मुद्दा धेरै निर्माताहरु केही समाचार बुरा हुनेछ छन्। उदाहरणको लागि, उपासनाको, "मर्सिडीज" स्थानहरू। यो 124-एम शरीर, 201-एम, 123-एम। यो विश्वासीपूर्वक, त्यसैले बोल्न, एउटा वास्तविक "फलाम घोडाहरू", आज पनि प्रवृतिमा रहने जो, र तिनीहरूले सेवा नयाँ मालिक छ। यी मिसिन तोड्न छैन - एक सार्वभौमिक पहिचान वास्तवमा।
ती "ओडी" - पनि विश्वसनीय विकल्प, "वोक्सवैगन"। धेरै मानिसहरू जापानी, अमेरिकी पुरानो मोडेल किन्न। अघिल्लो मालिक राम्रो थिए भने, कार उत्कृष्ट अवस्थामा छ। नयाँ मालिकले पनि उसलाई उपचार गर्ने मुख्य कुरा।
प्रयोग गरिएका मिसिन को खरिद / दुई वर्ष वा छ - यो एउटा अत्यन्तै लाभदायक व्यवसाय छ! त्यसैले तपाईं सिद्ध नयाँ सर्त 1/3 यो सानो घर बिक्रि भन्दा सस्ता मा एक मोडेल खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यति धेरै मानिसहरू गर्छन्।
सामान्य मा, विकल्प छन्, र के विकल्प गरेका छन्, यो सम्भावित खरिदकर्ता निर्णय छ।
सील SHRUS आफैलाई प्रतिस्थापन
कार "ओपल Astra GTC" (hatchback 3-ढोका): एक अवलोकन, विनिर्देशों र समीक्षा
Decarbonizer "Laurus": समीक्षा, निर्देशन। तरल इन्जिन Decarbonizer लागि "Laurus"
सीट कवर - आफ्नो कार को सान्त्वना र coziness
सडक Avtmobilistu मा मदत
बाड़ प्लास्टिक बनाइयो - एक आधुनिक प्रकार बाडिंग
राम्रो छ - "बीएमडब्ल्यू" र "मर्सिडीज"? दुई जर्मन नेताहरूले बीच छनौट
शौचालय को मरम्मत: प्रक्रिया को विशेषताहरु
तपाईं एक nobleman जस्तै महसुस गर्न चाहनुहुन्छ? भुईँकटर संग पोर्क - तपाईं गर्न मद्दत गर्नेछ नुस्खा!
Columnar currant: प्रजातिहरू, रोपण र हेरविचार विवरण
एरिक रबर्ट्स (एरिक एंथोनी रबर्ट्स): फिलिमोग्राफी, जीवनी र व्यक्तिगत जीवन (फोटो)
पागल: आहार मात्र एक मुट्ठी आवश्यक
तेल को मूल सिद्धान्त: जैविक र अकार्बनिक। तेल गठन कदम। कति वर्ष पर्याप्त तेल हुनेछ
वृद्धि flatulence: कारणहरू र उपचार
Luxio - उच्च गुणवत्ता को जेल लाह
अवलोकन मोटरसाइकल बीएमडब्ल्यू R1200RT